Iimpawu kunye nokuchazwa kobuchwephesha kweVivo X21, inkampani entsha ephathekayo | I-Androidsis
Iimpawu kunye nokuchazwa kobuchwephesha kweVivo X21, inkampani entsha ephathekayo
Enye yeetheminali ezilindelweyo kwinkampani yaseAsia iVivo, ibiyi I-X21, i-smartphone esiza kuthetha ngayo ngokulandelayo, kwaye iza nomboniso omkhulu we-19: 9 ngenotshi, efanayo nokuthetha uyilo lwenotshi phezulu, kunye nezinye iimpawu zangaphakathi eziza kuyibeka kumbambano webanga eliphakathi eliphakathi elinyathela ngesiqingatha seenyawo phezulu kuluhlu lwe-Android.
Phakathi kwezinye izinto ezibonakalayo, kukwakhona i-octa-core Qualcomm Snapdragon 660 SoC, kunye neenguqulelo ezimbini ezize nesifundi seminwe phantsi kwescreen. Siyakwandisa!
Ngokweenkcukacha zakho, IVivo X21 iza ixhotyisiwe, njengoko besitshilo ngokufutshane ngentla, ngescreen esikhulu se-6.28-intshi Super AMOLED ngesisombululo esigcweleyo se-2.280 x 1.080 pixels phantsi kwefomathi yepaneli ye-19: 9. indlela ebhityileyo ngayo inika esi sikrini sikhulu. Kwakhona, kuza noyilo lwenotshi, ekwabizwa ngokuba yi Inotshi, ifana njani ngokuthelekiswa ne-Apple X ye-Apple.
Ngokumalunga neenzuzo zangaphakathi esiziziswa yile nqanaba liphakathi linamandla, Sijongene neQualcomm Snapdragon 660 iprosesa engundoqo ezisibhozo (4x Kyro-260 kwi-2.2 GHz + 4x Kyro-260 kwi-1.8 GHz) kunye ne-Adreno 512 GPU, I-6GB ye-RAM evulekile, i-64GB yendawo yokugcina yangaphakathi yendawo eyahlukileyo eya kuza nomfundi ofaka iminwe ngasemva, kunye ne-128GB yenye leyo, ngokungafaniyo ne-64GB, eza nomfundi weminwe phantsi kwescreen.
Kwicandelo lokufota, iVivo ayishiywanga ngasemva, kwaye Ukuphakamisa i-12MP ye-sensor yangemva ene-f / 1.8 yokuvula kunye ne-5MP enye ene-f / 2.4 yokugxila ekugxilwe kuyo kunye ne-LED Flash. Ukongeza, ngaphambili, ine-12 megapixel shooter ene-f / 2.0 aperture, i-infrared sensor, kunye ne-Face Wake, uguqulelo lwe-ID yomenzi waseTshayina eya kusivumela ukuba sivule iselfowuni ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo.
Ngakolunye uhlangothi, Esi sixhobo siqhuba i-Android 8.1 Oreo phantsi kwenkqonkqo yokwenza ngokwezifiso iFuntouch OS 4.0, kwaye inyusa i-3.200mAh ibhetri engenakususwa nge-Quick Charge 4.0 inkxaso yokutshaja ngokukhawuleza.
Ukufumaneka kunye nexabiso leVivo X21
IVivo X21 ene-64GB yememori yangaphakathi kunye nomfundi weminwe obekwe ngasemva, Ixabisa i-2.898 yuan e-China, ethi, endaweni yayo, ibe malunga I-372 euro malunga. Kwaye, i-128GB ye-ROM eyahlukileyo kunye nomfundi ophantsi kwescreen sokufunda ngeminwe, iza ngexabiso le-3.598 yuan, enokuthi ibe malunga 462 euro.
Ezi fowuni zimbini ziya kubakho uku-oda kwangaphambili ngoMatshi 24 kwaye ziya kuqala ukuthengiswa ngoMatshi 28 e-China.. Baza kungena ngombala omnyama, omhlophe nobomvu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iimpawu kunye nokuchazwa kobuchwephesha kweVivo X21, inkampani entsha ephathekayo
I-HTC Desire 12 kunye ne-Desire 12+: Iifowuni zeBrand eNtsha yaPhakathi
I-Deutsche-Telekom iyeke ukwenza ngokwezifiso ii-smartphones